Shirkii Wadatashiga Barnaamijka Horumarinta Dhanka Wadooyinka - Cakaara News
Shirkii Wadatashiga Barnaamijka Horumarinta Dhanka Wadooyinka
Jigjiga(CN) jamce, 12ka February 2016, waxaa saaka hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada kadhacay shirka wadatashiga barnaamijka horumarinta sectorka wadooyinka ee qorshaha labaad ee koboca iyo isbadalka dhaqaalaha(GTP2) oo ay kasoo qaybgaleen xukuumada DDSI, deegaanka Hararida iyo ismaamulka Diridhaba.
Shirkaas oo uu furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayuu si qoto-dheer uga warbixiyay dhibaatooyinkii ba’naa ee dhanka wadooyinka deegaanka horay uga jiray isagoo sheegay in kadib markii salka loo dhigay nabadgelyada deegaanka 5tii sano ee u danbaysay laguda galay sidii wax looga qaban lahaa horumarinta baahida aas-aasiga ah ee bulshada. Taasina ay keentay in la aas-aaso shirkada horumarinta jidadka ee deegaanka oo nooc kasta oo qalab iyo shaqaale ahba loo dhamaystiray iyadoo shirkadu kuguulaysatay waxqabadyo aan lasoo koobi karin. Waxaana la isu furay 293 qabalee oo horay ukalaxidhnaa, degmooyin iyo gobolo intaba. Madaxwaynaha ayaa intaa kudaray, in xukuumadu ay qorshaha xiga biyaha uqaadatay dhanka horumarinta wadooyinka oo ay guulo wax ku ool ahna kasoo hoyisay iyadoo taasi furtay caqabadihii dhanka isugudubka gaadiidka iyo ganacsiga xorta ah, dhaqaalana u abuurtay bulshada deegaanka. Waxaana halkaa lagu soo bandhigay filimaan katurjumaya waxqabadyadii dhanka jidadka deegaanka iyo caqabadihii lala soo maray kagudubkooda.
Dhanka kale, maareeyaha guud ee wakaalada jidadka dalka(ERA) mudane enigineer Eray Girmay oo shirka kahadlay ayaa aad ugu riyaaqay waxqabadyada aan dib uga noqoshada lahayn ee dhanka horumarinta aas aasiga ah ee guud ahaan deegaanka kahirgalay gaar ahaana dhinaca jidadka. Wuxuuna xukuumada uga mahadceliyay hirgalinta go’aamada horumarkan laxaaadka leh keenay iyo waliba qorshayaasha ay dajisatay ee hirgalintooda lagu guda jiro.
kadibna, waxaa lasoo indha-indheeyay hoolka shirarka ee sida heerka sare ah loo dhisay.
Ugudanbayna, waxaa la isla eegay daraasaadyo ay wakaalada jidadka ee dalku kafulisay deegaanka dhinaca jidadka oo qorshaysan in lahirgaliyo 5tan sano ee qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha wareegiisa 2, aad. Waxaana si buuxda la iskula qaatay hirgalinta wadooyin laami ah sida: baabili ilaa xamaro, xamaro ilaa iimay, godey ilaa hargeele, godey-qalaafo ilaa feer-feer, jigjiga-faafan-goljano ilaa dhagaxmadaw, jigjiga ilaa teedhi, qabridahar ilaa wardheer, dhagaxmadaw-sagag-garbo ilaa dhanaan, qabalaha cali itoobiya ilaa dhagaxmadaw, ma’eyso ilaa diridhaba, jigjiga-danbal ilaa qintire, filtu ilaa mubaarak, xagarmoqor-goorobaqaqsa-qumdi ilaa jibriil iyo buundooyin farabadan oo waa wayn oo ay kamid yihiin: daawa iyo qubi.